သူကြီးမင်း (တုံးဖလား): October 2009
Posted by သူကြီးမင်း (တုံးဖလား) at 17:17 11 comments:
လူတိုင်းလူတိုင်း ကိုယ့်အပေါ် အရေးထားဆက်ဆံခံချင်ကြတာ ဓမ္မတာပါ။ ကိုယ်ကသာ ကောင်းကောင်းမဆက်ဆံပေမဲ့ ကိုယ့်အပေါ်ကိုတော့ ကောင်းစေချင်ကြတာလဲ ဖြစ်လေ့ဖြစ်ထရှိတဲ့ သဘောတရားတစ်ခုပါဘဲ။
ဒီတော့ လူတစ်ဘက်သားက ကိုယ့်အပေါ် အာရုံစိုက်လာစေဖို့၊ လူတစ်ဘက်သားအပေါ် ကိုယ့်ရဲ့ ပြောဆိုဆက်ဆံမှုတွေ လွှမ်းမိုးမှုရှိစေဖို့ လိုအပ်လာပါပြီ။ အဲဒီ ဆန္ဒလေးတွေ အကောင်အထည်ဖော်ဖို့ဆိုရင် အောက်က အချက်ကလေး ငါးချက်လောက် လေ့လာပြီး လေ့ကျင့်မှုပြုလုပ်ပါ။ မြေကြီးလက်ခတ်မလွဲ ဖြစ်ချင်တဲ့အတိုင်း ဖြစ်လာမှာ သေချာပါတယ်။
၁။ လူတစ်ဘက်သားကို ဘယ်လိုဆက်ဆံရင်ကောင်းမယ် ဆိုတဲ့ အစီအစဉ်လေးတစ်ခု ကြိုတင်ဆွဲထားပါ။
၂။ လူတစ်ဘက်သားအပေါ်မှာ အာရုံစူးစိုက်မှု အပြည့်အ၀ထားပါ။
၃။ လူတစ်ဘက်သားရဲ့သဘောထား၊ စိတ်ခံစားမှုတွေကို နားလည်ပေးပါ။
၄။ လူတစ်ဘက်သားကို သေသေချာချာလေ့လာပါ။
၅။ ကိုယ့်ကိုကိုယ် ယုံကြည်မှု၊ အသိကြွယ်မှု အပြည့်အ၀ရှိပါ။
အဲဒီငါးချက်ကို ကျကျနနလေ့လာကျင့်သုံးရင် လူတွေအားလုံးက ကိုယ့်အပေါ်အာရုံစိုက်လာကြပါလိမ့်မယ်။ ပြီးတော့ ကိုယ့်အပေါ် နားလည်မှု ယုံကြည်မှု အပြည့်အ၀ရှိလာပြီး ခင်မင်ဖွယ် အတုယူဖွယ် အားကျဖွယ် လူတစ်ယောက် အနေနဲ့ မြင်လာကြပါလိမ့်မယ်။ ဒါဆိုရင် လူတွေအပေါ် လွှမ်းမိုးနိုင်ပြီပေါ့။ လွှမ်းမိုးတယ်ဆိုတာ အနိုင်ကျင့် ဗိုလ်ကျတာကို ပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်။ ခေါင်းဆောင်ကောင်းတစ်ယောက် ဖြစ်လာနိုင်တာကိုဘဲ ဆိုလိုတာပါ။
Pauline Rowson, Communicating with More Confidence, P, 14 မှ အချက် ငါးချက်ကို ဘာသာပြန်ထားခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။
Posted by သူကြီးမင်း (တုံးဖလား) at 16:263comments:
နိုင်ငံတကာနှင့်ယှဉ်ပြီး Academic Presentation ပေးတော့မယ်ဆိုရင် အစီအစဉ်တကျ ဖြစ်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ နားထောင်တဲ့သူတွေ အများစုက Academic field ကနေ လာကြတာဆိုရင် Presentation အဆင့်ရှိမရှိ Checklist တွေနဲ့ တိုင်းတာ ဆုံးဖြတ်ပါလိမ့်မယ်။ ကျန်တဲ့အစိတ်အပိုင်းတွေမှာ ဘယ်လောက်ဘဲ အာပေါင်အာရင်းသန်သန်နဲ့ ပြောပြော Checklist တွေကို ထည့်မသုံးဘူးဆိုရင် အဆင့်အတန်းရှိတဲ့ Presentation တစ်ခု ဖြစ်လာနိုင်မှာ မဟုတ်ပါဘူး။ ဒါကြောင့်မို့ လိုအပ်သူများအတွက် ကျနော်တို့ကို ပေးဝေထားတဲ့ စာအုပ်ထဲမှ Checklist ကလေးတွေကို ထပ်ဆင့် မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်။ Presentation Skills ကျွမ်းကျင်နိုင်နှင်းနိုင်ကြပါစေ။
Checklist--- Signposts and Language Signals
I'd like to talk about............
I'm going to discuss............
I want to ........ about..........
What I'd like to do is to explain to you............
What I'm going to do is to describe........
What I want to do is to give an account of...........
Ordering Points (Time order)
Ordering points (Listening and adding)
If we move onto
Having considered (X), let us now move on to (Y)
So these were our methods. What about our results?
This slide (graph, chart) shows...
By X we mean yy.
X is defined as yy.
We call X yy.
We can define X as yy.
I'd like to underline
It's important to bear in mind
Concludingasection
I'd like to finish by saying....
I'd like to conclude now withafew remarks about.....
SOAS, University of London, IFCELS, Speaking and Listening Skills (Student Course book-2009) p-41 မှ ကူးယူမျှဝေပေးလိုက်ခြင်းပါ။ ။
Posted by သူကြီးမင်း (တုံးဖလား) at 09:305comments:
လူဖြစ်လာတော့လဲ လူ့လောကဆိုတာ ရှိလာပြန်ရော။ လူ့လောကထဲမှာ ရှိနေကြတဲ့ ကျနော်တို့ဟာ တစ်ယောက်ထဲ နေထိုင်လို့ မဖြစ်နိုင်ပြန်ဘူး။ အသင်းအဖွဲ့မိတ်ဆွေသူငယ်ချင်းတွေ လိုအပ်လာပြီလေ။ မိတ်ဆွေတွေရဖို့ ကျပြန်တော့လဲ ဆက်ဆံရေး လိုအပ်လာပြန်ရော။ အဲဒီဆက်ဆံရေး ကိစ္စကို ဘယ်လို ဖြေရှင်းကြမလဲ။ အာလုံးက ဆက်ဆံရေး ကောင်းမွန်ချင်ကြတာချည်းပါဘဲ။
စကားပြောအလွန်ကောင်းတဲ့ ၀က်စ်တန် ချာချီတို့လို၊ မာတင်လူသာကင်း တို့လို ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးတွေကို အားကျမိတာတော့အမှန်။
သူတို့ ဘာဖြစ်လို့ လူတွေနဲ့ ဆက်ဆံတဲ့အခါ လူတွေကိုစည်းရုံးရလွယ်ကူသလဲ။ စာရေးဆရာ Pauline Rowson ရဲ့အချက်အလက်ကလေးတွေနဲ့ နှိုင်းယှဉ်ကြည့်လိုက်ရအောင်။ စာရေးဆရာရဲ့ အလိုအရ အောက်ပါအချက်အလက်တွေက သူတို့ကို စကားပြောကောင်း၊ ဆက်ဆံရေးကောင်းတဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်များအဖြစ် ပို့ဆောင်ပေးခဲ့ပါတယ်တဲ့။ ။
၁။ ကိုယ့်ရဲ့ အားသာချက်၊ အားနည်းချက်ကို သိရမယ်။
၂။ ကိုယ့်အမူအယာ၊ ကိုယ့်စွမ်းရည်ကို ကိုယ်တိုင် အားရကျေနပ်မှု များစွာ ရှိရမယ်။
၃။ ကိုယ့်ရဲ့ ဘာသာရပ်ကို နားလည်ထားရမယ်။
၄။ ကိုယ့်ဘာသာရပ်အတွက် စွမ်းအင်၊ နှစ်သက်မှု၊ စိတ်ဝင်စားမှု အပြည့်အ၀ရှိရမယ်။
၅။ ရှင်းလင်းပြတ်သားတဲ့ အသံရှိရမယ်။
၆။ တည်ငြိမ်ပြီး ဆွဲဆောင်မှုအပြည့်ရှိရမယ်။
၇။ နားထောင်သူတို့ နားလည်နိုင်လောက်တဲ့ စကားလုံးကို သုံးစွဲတတ်ရမယ်။
၈။ ပြောတဲ့အကြောင်းအရာက နားထောင်သူနှင့် ပတ်သက်ဆီလျော်နေရမယ်။
၉။ ကိုယ်အမူအယာ (Body Lauguage) ကို ကောင်းစွာ အသုံးပြုပေးရမယ်။
၁၀။ နားထောင်မှုစွမ်းရည် ကောင်းမွန်ရမယ်။
၁၁။ မေးခွန်းပြုလုပ်ခြင်းနှင့်အနှစ်ချုပ်စွမ်းရည် ပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်ရှိရမယ်။
၁၂။ နားထောင်သူကို တန်ဖိုးထားရမယ်၊ အသိအမှတ်ပြုရမယ်၊ သက်တောင့်သက်သာ ဖြစ်စေရမယ်။
၁၃။ နားထောင်သူရဲ့ခံစားမှုကို နားလည်မှု အရည်အချင်းရှိရမယ်။
၁၄။ ပွင့်လင်းရမယ်၊ အားပေးနိုင်မှုစွမ်းအင်နှင့်အကြံဥာဏ်ပေးနိုင်မှုစွမ်းအင် ရှိရမယ်။
၁၅။ လိုအပ်ရင် သင့်လျော်တဲ့ တုန့်ပြန်မှု ပြုလုပ်ပေးရမယ်။
၁၆။ ဘယ်သူ့ကို စကားပြောနေတယ်ဆိုတဲ့အပေါ် မူတည်ပြီး ဆီလျော်တဲ့စကားလုံးများဖြင့် ရင်းနှီးစွာ ပြောဆိုတတ်ရမယ်။
အဲဒါတွေ အားလုံးပိုင်ပြီဆိုရင်တော့ စကားပြောအကောင်းဆုံး၊ ဆက်ဆံရေးအကောင်းဆုံး လူသားတစ်ယောက် ဖြစ်မှာ သေချာပါတယ်။
Pauline Rowson, Communicating with More Confidence, PP, 7-8 မှ အချက်အလက်တို့ကို ဘာသာပြန်ထားခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။
Posted by သူကြီးမင်း (တုံးဖလား) at 17:219comments:
ပုရိသတို့၊ ခြေချ မြေပြင်၊
ခြေရာ ဖနောင့်၊ ခပ်ဆောင့်ဆောင့်ကြောင့်၊
ဖနောင့် ခြေရာ၊ ထင်ရှားပါ၏။
ခြေဖျား ဖနောင့်၊ ဆောင့်ဆောင့်ချနှင်း၊
ညီလတ် ဖ၀ါး၊ ချကာသွားပြီး၊
ထင်ရှား ညီစွာ၊ မြေမျက်နှာဝယ်၊
Posted by သူကြီးမင်း (တုံးဖလား) at 14:072comments:
ကျီဦး အိုးဦး၊ စားဦး လှူရာ၊
ဤငါးဖြာသည်၊ လူ့ရွာ နတ်ပြည်၊
လှူသောအားကြောင့်၊ ထင်ရှား နာမ၊
ထက်သန်စွာဖြင့်၊ သမ္မာ ဒါန၊
Posted by သူကြီးမင်း (တုံးဖလား) at 12:203comments:
တစ်ချက်ဖြစ်ခါ၊ ယူကေ နာရီ၊
ဇနီး ယောက်ျား၊ သမီးသားနှင့်၊
အိပ်ယာ ကုတင်၊ တလင်းပြင်၌၊
သဟာအပေါင်း၊ ဆုတွေတောင်းလော့။ ။
Posted by သူကြီးမင်း (တုံးဖလား) at 16:116comments:
Posted by သူကြီးမင်း (တုံးဖလား) at 23:304comments:
လျောက်မည့်လမ်း ကြမ်းပါစေ တွေဝေစိတ် နှိပ်ကွပ်ရန် မှန်မှန်လျောက်
Posted by သူကြီးမင်း (တုံးဖလား) at 18:245comments:
ခါတန်ဆောင်မုန်း၊ လဆန်း သုံး နှင့်
တစ် သုံး ခြောက် နှစ်၊ သက္ကရာဇ်ကောဇာ၊
ရောက်သောခါက၊ မာတာ မိခင်၊
ပုတ္တာ သားတို့၊ မျက်ရည်စို့ပြီး၊
မာတာ အမေ၊ ရပါစေဟု၊
ပြုပြီး ထိုခါ၊ ပေးဝေပါသည်၊
တစ် သုံး ခွန် တစ်၊ သက္ကရာဇ်ကောဇာ၊
ခုခါ မှာကား၊ မာတာအမေ၊
အထူး ၀န္ဒနာ၊ လက်ဆယ်ဖြာဖြင့်၊
ခါခါ ဦးခိုက်၊ ကန်တော့လိုက်သည်၊
မဟီမြေထု သိစေသော်။ ။
Posted by သူကြီးမင်း (တုံးဖလား) at 09:32 12 comments:
ထိုကို ကြောင်းပြု၊ လုပ်ငန်းစုနှင့်၊
ကောင်းမှု မိတ်ဆွေ၊ မြတ်စာပေကို၊
ရိုသေ ဆက်ဆံ၊ သင်ကျက်အံသော်၊
အမှန် စီးပွါး၊ လွန်ထွန်းကား၍၊
ထင်ရှား ချမ်းသာ၊ လူ့ရပ်ရွာတွင်၊
ပညာရှိဖြစ်၊ လူ နတ် ချစ်မည်၊
နစ်နစ်ကာကာ၊ ကြိုးစားပါလော့။ ။
Posted by သူကြီးမင်း (တုံးဖလား) at 16:423comments:
Posted by သူကြီးမင်း (တုံးဖလား) at 20:099comments:
ပို ပိပြား၏။ ။
Posted by သူကြီးမင်း (တုံးဖလား) at 21:06 14 comments:
Posted by သူကြီးမင်း (တုံးဖလား) at 10:21 13 comments:
ငါတော် ငါတတ်..... ငါမှမြတ်ဟု၊
ငါအတ္တစွဲ..... ငါဘဲ လုပ်ရ၊
ငါမာနနှင့်..... ငါက ပြီးဆို၊
ငါလိုသို့ရောက်..... ငါ ပြီးမြောက်၏။
ငါ့ကိုယ် ငါ့ဟာ..... ငါ့ဥစ္စာနှင့်
ငါသာ ပိုင်စိုး..... ငါမျိုးမျိုးတည်း၊
ငါ့သမီး သား..... ငါ့မယားဟု၊
ငါ့အား ချစ်မက်၊ ငါ မာန်တက်၏။
ငါ့မျိုး ငါ့ဆွေ..... ငါ့ ဌာနေ၀ယ်၊
ငါ့ဥစ္စာစွဲ..... ငါကဲ ကဲပြီး
ငါစွဲ သက္ကာ..... ငါ အတ္တာနှင့်၊
ငါ ငါ စွဲငြိ..... ငါဒိဋ္ဌိပွါး၊
ငါ လွဲမှားစွာ..... ငါသာ ပထမ၊
ငါ ဓိကဟု..... ငါရ ပြီးရော၊
ငါ ပါယ်ကြောဝယ်..... ငါမျော မျောပြီး၊
ငါ ချည်းနှီးတည်း။ ။
မြီးကျက် မြီးစား..... ခေါင်းကျက်သွားသော်၊
ခေါင်းစားမည်ပင်..... လိုအင် ကာမ၊
ထိုပုရိကို..... သတိရှေ့ ပြေး၊
နားလည်ထားပြီး..... ရှောင်ရှား ဝေးစွာ၊
လျောက်လှမ်းရာကို..... စိတ်မှာ မထောင့်၊
ဖြောင့်ဖြောင့်တန်းတန်း..... လျောက်မြဲလှမ်းလော့။ ။
Posted by သူကြီးမင်း (တုံးဖလား) at 10:584comments:
လွမ်းစေရာညွှန်း..... လွမ်းကို လွမ်းဖို့၊
လွမ်းဖျား ဖျားချင်..... လွမ်း ငိုချင်၏။
လွမ်းမျက်ရည်ကျ..... လွမ်း တသနဲ့၊
လွမ်းလှပါသည်..... လွမ်း အလီဆင့်၊
လွမ်းရေးသင့်က..... လွမ်းပိုရ၏။ ။
Posted by သူကြီးမင်း (တုံးဖလား) at 00:29 8 comments:
ချစ်သဲ မူပို..... ချစ် မဲ လိုဘူး။
ချစ်ဘ၀မှာ..... ချစ်ကြ ကြိုက်ကြ၊
ချစ်မ၀လို့..... ချစ်က ချစ်ဆို၊
Posted by သူကြီးမင်း (တုံးဖလား) at 17:334comments:
Posted by သူကြီးမင်း (တုံးဖလား) at 17:293comments:
စိတ်ဆိုး စိတ်မိုက်..... စိတ်လိုလိုက်ပြီး၊
စိတ်ကို မရှု..... စိတ်တုနှင့်ပင်၊
စိတ်မှန် စိတ်မြတ်..... စိတ်ကောင်းဓါတ်ခံ၊
စိတ်ဆက်ဆံ၍..... စိတ်ဥာဏ် မြင်သိ၊
စိတ်ရှုပြီးနေ..... စိတ်ပျော်စေ၏။ ။
Posted by သူကြီးမင်း (တုံးဖလား) at 10:185comments:
အပျော် သောက်စား..... ပျော်ကစား၍၊
ပျော်ပင် ပျော်လျက်..... ပျော်နေ့ရက်တို့၊
ပျော်လုပ်တစ်လွဲ..... ပျော်ခဲ ခဲပြီး၊
ပျော်ကြီး ပျော်လို့..... ပျော်ဖို့ စိတ်ထဲ၊
ပျော်မြဲ ပျော်လျင်..... ပျော်ရွှင်အစစ်၊
ပျော်မမြဲပါ..... ပျော်ဆဲ ပျော်လျင်၊
ပျော်ဝယ် ပျော်သွား..... ပျော်အများနှင့်၊
ပျော်ကားစီးကာ..... ပျော်မာယာချဲ့ ၊
ထို့ကြောင့် ပျော်နည်း..... ပျော်စည်းအမှန်၊
ပျော်စစ် ပျော်တု..... ပျော်မှုခွဲခြား၊
Posted by သူကြီးမင်း (တုံးဖလား) at 15:143comments:
ပျင်း အပြီးပိတ်..... ပျင်းစိတ်တွေကြွေ၊
Posted by သူကြီးမင်း (တုံးဖလား) at 17:017comments:
လွမ်းချင်း တမ်းချင်း..... လွမ်းသီချင်းနှင့်၊
သောတ စက္ခု..... ကြား ရှု တုံလတ်၊
၀မ်းနည်း ၀မ်းသာ..... မျက်ရည်ဖြာလျက်၊
အတိတ် ပစ္စု..... နာဂါတ် မှုခင်း၊
၀ီရ စသား..... ဘာဝပြားလျက်၊
Posted by သူကြီးမင်း (တုံးဖလား) at 15:213comments:
သီတင်းကျွတ် ခါသမယ......... လာသမျှ လုံးစုံ၊
ထာဝရ ပြုံးရွှင်ကြည်.........ရွှေမြန်ပြည် ထက်ချုံး၊
ကမ္ဘာ့ရွာ မိတ်ဆွေတွေကို.........တိုးတက်စေ မေတ္တာမဆုံး၊
၀ါလကျွတ် မင်္ဂလာမှာ......... ရိပ်သာကို ဆက်သွား၊
မျက်မထား ဒေါသကွာသည်၊ ဘာဝနာ ထပ်လို့သာပွါး၊
၀တိံနန်းက ဆင်းသက်လာသည်.........ဘဂ၀ါ နတ်သနင်း၊
လူနတ်ချင်း ချစ်ကြည်ဖြူ......... ကြိုကြအတူ၊
သူတို့ချင်း ရိုင်းပင်းကူသည်......... ကျွန်းဇမ္ဗူ ခြိမ့်သဲလို့လေး။
မြဲမပြတ် သဒ္ဓါဆောင်သည်......... ဆီမီးရောင် ထွန်းညှိစို့လေး။
မြတ်သီလ စိတ်ကမျှော်ရည်......... ဥပုသ်တော် ယူကြစို့လေး။ ။
Posted by သူကြီးမင်း (တုံးဖလား) at 09:14 10 comments:
Posted by သူကြီးမင်း (တုံးဖလား) at 12:303comments:
ဒီအယူဟာ ဟိန္ဒူဘာသာမှာ အရိုးစွဲနေပါပြီ။
Sati (apractice of suicide burning) မီးလောင်ပြီးအသေခံခြင်း
လင်ယောက်ျားသေဆုံးပြီးနောက် ကျန်ရစ်တဲ့အမျိုးသမီးကို အမင်္ဂလာမိန်းမ၊ ကျက်သရေတုံးတဲ့မိန်းမ တစ်ယောက်အနေနဲ့ မြင်ကြပါတယ်။ ဒါကြောင့်မို့ ဒီ Sati ဆိုတဲ့ ထုံးတမ်းစဉ်လာ ပေါ်ပေါက်လာရတာပါ။
ဒီ Sati က နှစ်မျိုးရှိပါတယ်။ Widow-Burning နှင့် Jauhar ပါ။ ရှင်းပြပါမယ်။
Widow-Buring (မုဆိုးမကို မီးရှို့ သတ်ကြခြင်း)
မုဆိုးမကို မီးရှို့ သတ်ကြတယ်ဆိုပေမဲ့ များသောအားဖြင့် ကျန်ရစ်သူ မုဆိုးမကိုယ်တိုင်က သူ့ကိုသူ အဆုံးစီရင်တာပါ။ ဘယ်လို စီရင်သလဲဆိုတော့ လင်ယောက်ျားရဲ့ အလောင်းကို မီးရှို့ တဲ့ Funeral Pyre လို့ခေါ်တဲ့ မီးပုံထဲ ခုန်ဆင်းပြီး သူမကိုယ်သူမ(သူမယောက်ျားအလောင်းနှင့်အတူ) မီးလောင်စေပြီး အသေခံတာပါ။ မုဆိုးမဘ၀နှင့်မယှဉ်သန်ချင်တာလဲ ပါမှာပေါ့လေ။ နောက်အိမ်ထောင်ပြုခွင့်မရမဲ့အတူတူ သေတာဘဲကောင်းပါတယ်ဆိုတဲ့ အယူလဲ ရှိကောင်းရှိနိုင်ပါတယ်။ ကျန်ရစ်သူမုဆိုးမကိုယ်တိုင် သူမဆန္ဒနှင့်သူမ အသေခံတာရှိသလို
လင်ယောက်ျားရဲ့ ဆွေမျိုးတွေက အတင်းအကြပ် မီးပုံထဲခုန်ဆင်းခိုင်းလို့ သေရတဲ့ မုဆိုးမတွေလဲ မနည်းခဲ့ပါဘူး။
ဟိန္ဒူဘာသာရဲ့အမွန်မြတ်ဆုံးကျမ်းဟာ ဝေဒအမည်ရှိတဲ့ကျမ်းတွေပါ။ အဲဒီဝေဒကျမ်းတွေထဲက ရိဒ်ဝေဒကျမ်းဟာ ရှေးအကျဆုံးကျမ်းဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီ ရိဒ်ဝေဒကျမ်းထဲမှာ Sati Hynm လို့ခေါ်တဲ့ မုဆိုးမမီးလောင်ခံတဲ့အခမ်းအနားမှာ သီဆိုတဲ့ ဘာသာရေးသီချင်းတွေကို ဖော်ပြထားပါတယ်။ မုဆိုးမမီးလောင်အသေခံတာတောင် အခမ်းအနား အတီးအမှုတ် အကအခုန်တွေနဲ့ ပြုလုပ်လိုက်ကြသေးတယ်။ အတော်ကို မတရားအနိုင်ကျင့်လွန်းပါတယ်။
သေချာလေ့လာကြည့်လိုက်တော့ သူတို့မှာ ဒီလိုယုံကြည်မှုလေးတွေကြရှိတယ်။
လင်ယောက်ျားအလောင်းနှင့်အတူ မီးလောင်အသေခံတဲ့ အမျိုးသမီးကို----
၁။အလွန်မြင့်မြတ်ပြီး သီလနှင့်ပြည့်စုံတဲ့ အမျိုးသမီးလို့ အများက သတ်မှတ်ကြခြင်း
၂။သေဆုံးပြီးပြီးချင်း ကောင်းကင်ဘုံသို့ တိုက်ရိုက်ရောက်ရှိနိုင်ခြင်း
၃။ငရဲမှာ ဒုက္ခခံစားနေရတဲ့ ဆွေမျိုးတွေအားလုံးကို ကယ်တင်ရာရောက်ခြင်း
၅။ကောင်းကင်ဘုံ၌ နှစ်ပေါင်း ၃၅ သန်းတိုင်တိုင် သူမယောက်ျားနှင့်အတူ စည်းစိမ်ခံစားနိုင်ခြင်း
၆။ကျန်ရစ်သူများက အမှတ်ရနေစေရန်အတွက် ဘုရားကျောင်းတစ်ခုခုကို သူမအတွက် ဆောက်လုပ်ပေးကြခြင်း၊
အဲဒီလို ယုံကြည်မှုတွေကြောင့် အမျိုးသမီးတွေရဲ့ ဘ၀ဟာ ပိုပြီး အဖိနှိပ်ခံဖြစ်ခဲ့ရပါတယ်။
ဒီလိုအလေ့အကျင့်တွေ ပျောက်ပျက်ခဲ့တာ နှစ်ပေါင်း ရာချီရှိခဲ့ပြီဆိုပေမဲ့ အိန္ဒိယနိုင်ငံအစွန်အဖျားဘက်မှာ တစ်ခါတစ်ရံ ဒီကျင့်ထုံးကို ယနေ့တိုင်အောင် ပြုလုပ်နေကြပါသေးတယ်။
Jauhar (မိန်းမများ အစုလိုက်အပြုံလိုက် မီးရှို့ အသတ်ခံရခြင်း)
ဒီအလေ့အကျင့်ဟာ Sati နှင့်အနည်းငယ်ကွဲသယောင်ထင်ရပေမဲ့ အမှန်ကတော့ Sati အလေ့အကျင့်ပါဘဲ။
ယောက်ျားတွေ စစ်မြေပြင်ထွက်တဲ့အခါမျိုးမှာ တစ်မြို့လုံးမှာရှိတဲ့ အိမ်မှာကျန်ရစ်ခဲ့တဲ့ ဇနီးနှင့်သမီးတွေအားလုံးကို စစ်မထွက်ခင် အစုလိုက်အပြုံလိုက် မီးရှို့သတ်ဖြတ်ခဲ့ကြလေ့ရှိပါတယ်။
သူတို့ ဒီလိုလုပ်တာဟာ အကြောင်းနှစ်ချက်ကြောင့်လုပ်ရတာပါ။
၁။ဇနီးနှင့်သမီးတွေအားလုံး ရန်သူလက်တွင်းကို ကျရောက်ခြင်းမှ ကြိုတင်ကာကွယ်ထားခြင်း
၂။စစ်ထွက်သွားတဲ့ယောက်ျားတွေဟာ စစ်မြေပြင်မှာ သေဖို့ရာခိုင်နှုန်းများတဲ့အတွက် ဇနီးမယားတွေ မုဆိုးမဘ၀ ရောက်ရဖို့ ကျိန်းသေခြင်း။ (မုဆိုးမဘ၀ဟာ အမင်္ဂလာ၊ ကျက်သရေမရှိ ဟု အယူရှိကြ၏)
အဲဒီလို အစုလိုက်အပြုံလိုက် မီးရှို့ အသေခံတဲ့ အမျိုးသမီးတွေထဲမှာ အမျိုးသမီးအများစုက သူတို့စေတနာအလျောက် အသေခံကြတာပါ။ သေဖို့ ဆန္ဒမရှိတဲ့ အမျိုးသမီးကိုလဲ လင်ယောက်ျားက အတင်းအဓမ္မအသေခံခိုင်းပါတယ်။ သေဖို့ဆန္ဒရှိရှိ မရှိရှိ အားလုံး သေကြကြတာချည်းပါဘဲ။ တော်တော်ဥာဏ်ကြီးကြတဲ့သူတွေဘဲနော်။ စစ်မရောက်ခင် များကုန်နေကြပြီ။ စိတ်ပျက်စရာအလွန်ကောင်းပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ဒီအယူဝါဒတွေကို ဒီခေတ်မှာတော့ မကျင့်သုံးကြတော့ပါဘူး။ ပျောက်ပျက်သွားပါပြီ။
No divorce and no remarriage (အိမ်ထောင်ကွဲနှင့်ပြန်အိမ်ထောင်ပြုခြင်းတို့ကို ခွင့်မပြု)
ယောက်ျားဘယ်လောက်ဆိုးဆိုး မိန်းခလေးမှာ အိမ်ထောင်ကွဲခွင့်မရရှိပါဘူး။ ကြိတ်မှိတ်သည်းခံပြီးနေရုံပါဘဲ။ တကယ်လို့ ယောက်ျားနှိပ်စက်တာ မခံနိုင်လို့ အိမ်ကထွက်ပြေးရင်တောင်မှ ဟိန္ဒူဝန်းကျင်ထဲမှာ ကျင်လည်နေသရွေ့ဘယ်တော့မှ နောက်အိမ်ထောင်ပြုခွင့်မရှိပါဘူး။
Purdah (သူစိမ်းရှေ့ မှာ မျက်နှာဖုံးကွယ်ထားရခြင်း)
ဟိန္ဒူအမျိုးသမီးတွေဟာ လျို့ ဝှက်စွာ သီးသန့်နေရပါတယ်။ အပြင်ထွက်ရင်လဲ ခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံးအပြင် မျက်နှာကိုပါ အ၀တ်နှင့်ဖုံးကွယ်ပြီးထွက်ရပါတယ်။ မျက်စိမြင်ရရုံသာ အပေါက်ကလေးတွေပြုလုပ်ထားပါတယ်။ ကျနော်တို့ အများစုက မွတ်စလင်မတွေသာ အပြင်ထွက်ရင် မျက်နှာဖုံးကွယ်ပြီးထွက်ရတယ်လို့ သိကြတာပါ။ အမှန်တကယ်က ဟိန္ဒူအမျိုးသမီးတွေလဲ Purdah လို့ခေါ်တဲ့ မျက်နှာဖုံးကွယ်ပြီး အပြင်ထွက်ရတဲ့ စည်းကမ်းဥပဒေတွေရှိပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ဒီဥပဒေကို ဇာတ်မြင့်အာရိယန်ဟိန္ဒူတွေသာ မှန်မှန်ကန်ကန်လိုက်နာကြတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ ဒီလို မျက်နှာကို ဖုံးကွယ်ထားခြင်းအားဖြင့် တစ်ခြားယောက်ျားလေးတွေရဲ့တဏှာရန်မှ လွတ်ကင်းနိုင်တယ်လို့ သူတို့ ယုံကြည်ထားကြပါတယ်။
အမျိုးသမီးဆိုသူတွေ အများစုကလဲ အလှအပအတွက်နှင့် ဂုဏ်အတွက်ဆိုရင် ငွေကုန်တာ ထမင်းငတ်ခံတာကို အသာလေးထားပြီး အသက်ကိုတောင် မနှမြောတတ်ကြလေတော့ သူတို့ကြောင့်လဲ ခပ်ခက်ခက်ပါဘဲ။
3.Thitthila, Ashin, (1992) Essentail Themes of Buddhist Lectures, Yangon: Religious Affairs Press.
4.Pruthi, R and Sharma, B.R (1995) Buddhism, Jainism and Women, New Delhi: Anmol Publications.
Posted by သူကြီးမင်း (တုံးဖလား) at 15:203comments: